मद्दत - BBC News नेपाली
बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइट पढ्न वा यसमा भएका कार्यक्रमहरु सुन्नका लागि तपाईंलाई सघाउन तलका जानकारीहरु उपयोगी हुनेछन् भन्ने हाम्रो आशा छ। यदि तपाईंले खोजेको जस्तो उत्तर यहां पाउनु भएन भने कृपया हामीलाई इमेल गर्नुहोला।
ब्राउजर बीबीसी नेपाली वेबसाइट इन्टरनेट एक्सप्लोरर (भर्शन 5.5 भन्दा माथिको) र नेटस्केप (भर्शन4भन्दा माथि) लाई सुहाउने गरी तयार गरीएको छ। यदि तपाईंको कम्प्युटरमा यी मध्य कुनै एक ब्राउजर छ भने तपाईंले हाम्रो फोन्ट डाउनलोड गरेर यो वेबसाइट पढ्न सक्नुहुन्छ।
अपरेटिंग सिस्टम यदि तपाईंसँग Windows 2000 वा Windows XP छ भने बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइट पढ्न कुनै फोन्ट डाउनलोड गर्नु पर्दैन।
तपाईंसँग Windows 2000 छ भने आफ्नो कम्प्युटरको Control Panel मा गएर Regional Options मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि खुल्ने बक्सको General ट्याबमा क्लिक गर्नुस्, अनि Language settings for the system मा गएर त्यसभित्रको Indic विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग Windows XP छ भने आफ्नो कम्प्युटरको Control Panel मा गएर Language and Regional Options मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि खुल्ने बक्समा Languages ट्याबमा क्लिक गर्नुस् र Install files for complex script and right to left languages (including Thai) विकल्प रोज्नुहोस्।
स्क्रीन बीबीसी नेपाली सेवाको वेब पेज 600x480 पिक्सल वा त्यो भन्दा बढीको स्क्रीन साइजमा सजिलै हेर्न सकिन्छ।
अडियो बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइटमा भएको अडियो Real Audio 4.0 का निम्ति मिल्ने गरी इन्कोड गरीएको छ। तर तपाईं Real Player 4.0 बाहेक Windows Media Player मा पनि हाम्रा कार्यक्रमहरु सुन्न सक्नुहुन्छ। Real Player को सामान्य भर्शन डाउनलोड गर्नका लागि यहां क्लिक गर्नुहोस्। http://www.bbc.co.uk/radio/audiohelp_install.shtml
बीबीसी नेपाली वेबसाइटमा अडियो कसरी सुन्ने? बीबीसी नेपाली वेबसाइटमा बीबीसी नेपाली सेवाको प्रसारण प्रत्यक्ष र आफूले चाहेको बेलामा सुन्न सकिन्छ। साथै प्रसारण भैसकेका केही चुनिएका कार्यक्रम र अन्तर्वार्ताहरु पनि यो वेबसाइटमा उपलब्ध छ। तिनको बारेमा वेबसाइटमा स्पष्ट जानकारीहरु छन्। ती अडियोहरु सुन्न तिनमा कर्सर लगेर क्लिक गर्नुपर्छ।
अडियो सुन्न समस्या पर्यो?
"अडियो क्लिप सुन्न सकिएन" पहिले अडियो फाइल पूरा डाउनलोड भयो की भएन बिचार गर्नुहोस्। तपाईंको प्लेयरले क्लिपको नाम देखाएको छ की छैन? छैन भने उक्त क्लिप पूरा डाउनलोड भएको छैन। फेरि लोड गर्नुहोस्।
यदि क्लिपको नाउँ पनि देखिन्छ, प्लेयरको टाइमर पनि चलिरहेको छ तर आवाज चाहिं सुनिएन भने आफ्नो स्पीकर वा हेडफोन ठिकसँग जोडिएको छ की छैन जांच्नुहोस्। Volume control पनि जांचि हेर्नुहोस्। कतै त्यो बन्द त छैन?
त्यसपछि पनि अडियो सुन्न सकिएन भने कृपया कुन चाहिं क्लिप सुन्न नसकिएको हो उल्लेख गरेर हामीलाई इमेल गर्नुहोस्। उक्त पेजको URL पनि संलग्न गरेर पठाउनु होला।
"एउटा मात्र क्लिप सुन्न सकिएन" त्यस्तो क्लिप बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइटको हो या अरु नै कुनै साइटको हो बिचार गर्नुहोस्। अडियो फर्म्याट फरक पर्यो भने पनि सुन्नमा समस्या हुन्छ। तपाईंले प्रयोग गर्नु भएको प्लेयर Real Player हो कि होइन त्यो पनि यकिन गर्नुपर्छ। बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइटमा भएका अडियो Real Player वा Windows Media Player बाट मात्रै सुन्न सकिन्छ। यी बाहेक अरु प्लेयरमा यो बज्छ नै भन्ने छैन।
"बीबीसी नेपाली सेवाको अडियो डाउनलोड गर्न सकिएन" कपीराइट, प्रतिलिपी अधिकारका विभिन्न शर्त र नियमहरुका कारणा बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइटमा उपलब्ध अडियो तपाईंले डाउनलोड गरेर सुन्न सक्नुहुन्न। तपाईं त्यसलाई इन्टरनेटमा मात्रै सुन्न सक्नुहुन्छ।
बीबीसीको बारेमा जानकारी चाहियो?
बीबीसी नेपाली सेवा यसका लागि दाहिने तर्फको सूचीमा रहेको "हाम्रो बारेमा" भन्ने लिंकमा क्लिक गर्नहोस्।
बीबीसी विश्व सेवा इन्टरनेट र रेडियोमा उपलब्ध हाम्रा सेवाहरू लगायत बीबीसी विश्व सेवाका बारेमा थप जानकारी हासिल गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्:
बीबीसी संयुक्त अधिराज्यमा बीबीसीका सेवाहरु र समग्र बीबीसीकै बारेमा जान्न चाहनु हुन्छ भने कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: